Dhamma Yanant: သိက္ခာရှိတဲ့လူ...
This entry was posted on 8:42 AM and is filed under article . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
On Tuesday, July 14, 2009 9:34:00 AM , ကိုကို said...
တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း မှုသား မပြောမဖြစ်ပြောလိုက်ရတာလေးတွေ ရှိပါတယ်ဘုရား...။ မုသားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူတပါးကိုလဲ ထိခိုက်နစ်နာခြင်း မရှိရင်ရော အပစ်ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
On Tuesday, July 14, 2009 3:02:00 PM , အဖြူရောင်မေတ္တာ said...
ဘုန်းဘုန်းမင်္ဂလာပါ.. ဖိုးသား ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို လာကူးတာပါဘုရား၊ မေးလ်နဲ့ ဖြန့်ချင်လို့ပါ.. အဲဒါ ဒီ ကိုကို ရဲ့ အမေးလေးကို တွေ့တော့ ဖိုးသားဖတ်ဖူးတဲ့ မင်္ဂလာသတင်းစဉ် (http://mawluu.blogspot.com/2009/07/blog-post_7717.html)ဘလော့မှာ မုသာဝါဒနဲ့ ပတ်သတ်တာလေး တင်ထားလေးကို ကူးယူဖော်ပြ လိုက်ပါတယ် ဘုန်းဘုန်း။ ဘုန်းဘုန်းကို မလေးမစားလုပ်သလို ဖြစ်သွားရင် တောင်းပန်ပါရစေ။
ဘာသာရေး ပြဿနာ ( ၇၄ )
( ဘဒ္ဒန္တတိလောကသာရ ဖြေသည် )
( မေး ) ( မုသာဝါဒ နှင့် သမ္ဖပ္ပလာပ )
၁။ မုသာဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍ သူတပါးအကျိုး မပျက်စီးလျှင် ကံမမြောက်ဟု သိရပါသည်။
ဥပမာ-မိတ်ဆွေတဦးက တပည့်တော်၏ အသက်ကိုမေးရာတွင် ရှိရင်းအသက်ထက် တနှစ်လျှော့ပြောခြင်း စသောကိစ္စများ၌ မုသာဝါဒ မြောက်-မမြောက် သိလိုပါသည်။
၂။ သမ္ဖပ္ပလာဝါစာကို တိတိကျကျ သိချင်ပါသည်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနှင့် အလ္လာပသလ္လာပ စကားပြောခြင်း၊ မိမိအတွေ့အကြုံကို ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် ပြောခြင်းတို့သည်သမ္ဖပ္ပလာပ ၀ါစာ မြောက်-မမြောက် သိလိုပါသည်၊ ဖြေကြားပေးတော်မူပါဘုရား။
( မောင်ဝေဟန်-ခေတ္တ စင်ကာပူ )
၁။ မုသာဝါဒနှင့်စပ်၍ သူတပါးအကျိုး မပျက်စီးလျှင် ကံမမြောက်သည် မဟုတ်။ ပြောဆိုရာ၌-
(၁) မဟုတ်မမှန်သော ၀တ္ထုလည်းဖြစ်စေ
(၂) ချွတ်ယွင်းစေလိုသောစိတ် ရှိသည်လည်းဖြစ်စေ
(၃( ထိုစိတ်ထားဖြင့် ပြောဆိုသည်လည်းဖြစ်စေ
(၄) နားထောင်သူက နားလည်သည်လည်းဖြစ်စေ
ဤအင်္ဂါလေးပါး စုံညီလျှင် ကံမြောက်သည်။
အကျိုးမပျက်စီးက အပြစ်ပေါ့၍, အကျိုးပျက်စီးက အပြစ်ကြီးသည်။
မုသာဝါဒကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်မှ အခြား ၄-ပါးကို လုံခြုံနိုင်သည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ အလောင်းတော်သည် အခြား ၄-ပါးသော ကံထက် မုသာဝါဒကို လုံခြုံစေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ငါးပါးသီလတွင် မုသာဝါဒသည် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
ကုသိုလ်တရားတို့တွင် သစ္စာ-မှန်ကန်ခြင်းသည် အကျိုးအကြီးဆုံး ဖြစ်သကဲ့သို့ အကုသိုလ်တရားတို့တွင် မုသာဝါဒသည် အပြစ်အကြီးဆုံး ဖြစ်ကြောင်း ဘုရားဟောတော်မူသည်။
၂။ သမ္ဖပ္ပလာပ၀ါစာ ဟူသည် မိတ်ဆွေတို့နှင့် ရိုးရိုး အလ္လာပသလ္လာပ ပြောဆိုခြင်း အတွေ့အကြုံကို အမှန်အတိုင်း ပြောဆိုခြင်းမျိုး မဟုတ်။
အနှစ်အသားမဖက် အနက်အဓိပ္ပါယ် ကင်း၊ ပြိန်ဖျင်း၊ မမှန်ကန်၊ ဒဏ္ဍာရီဝတ္ထုမျိုးဖြစ်သည်။
ဥပမာ-ရွှေယုန် နှင့် ရွှေကျား သက်ငယ်ရိတ်သွား၊ ဒွန်းစဏ္ဍားနှင့် မင်းသမီး ညားပုံ စသည့် အချိန်ကုန် အကျိုးမရှိ၊ ပျင်းရိ အိပ်ချင်ပြေရုံလောက်ပင် အကျိုးထင်သည့် ပုံပြင်စကားမျိုး ပြောဆိုခြင်းကို ဆိုလိုပါသည်။
စကားကို တန်ဆာဆင်၍ ဥပမာတင် ပြောဆိုမှုမျိုးကား သမ္ဖပ္ပလာပ မဟုတ်ပေ။